प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि पनि संकटको लाभ मिल्ला त ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि पनि संकटको लाभ मिल्ला त ?
अबको सरकार बहस
ओलीको एक मात्र आशाको त्यान्द्रो जनता समाजवादी पार्टी हो । यसलाई पनि सग्लो रुपमा आफ्नो पक्षमा उभ्याउन ओलीले सकिरहेका छैनन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह मात्र ओलीप्रति लचक देखिएको छ ।
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार १९:३०:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन तयार भएका छन् । राजनीतिक दाउपेच, जोडघटाउ र विपक्षीका कसरत हेर्ने हो भने उनले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।
उनको आफ्नै पार्टी तीन टुक्रा भएको छ र दुईवटा समूह उनलाई जसरी पनि गद्दीच्यूत गर्न लागिपरेका छन् । आफ्नै पार्टीबाट चोइटिएका दुई समूह त उनलाई सडकमा पछार्न लागेका छन् भने विपक्षीहरु लाग्ने नै भए । कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समूहको कसरत जारी नै छ ।
ओलीको एक मात्र आशाको त्यान्द्रो जनता समाजवादी पार्टी हो । यसलाई पनि सग्लो रुपमा आफ्नो पक्षमा उभ्याउन ओलीले सकिरहेका छैनन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह मात्र ओलीप्रति लचक देखिएको छ । तर, यस समूहसँग पार्टीमा बहुमत छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको बहुमत छ । संसदीय समितिमा ठाकुर पक्षको बहुमत जुनसुकै बेला उल्टिने अवस्था छ । अझ भन्दा पार्टीको बहुमतभन्दा विपरीत दिशामा जाँदा भएको पद र शक्ति पनि गुम्ने जोखिम छ ।
तर, ओलीका हकमा विगतदेखि नै हेर्ने हो भने हरेक संकटलाई उनी आफ्ना लाभका निम्ति उपयोग गर्न सफल हुँदै आएका छन् ।
ओली शक्तिशाली बन्दै गएको २०७२ को भूकम्पपछि हो । भूकम्पलाई देखाएर त्यही वर्ष जेठ २५ गते प्रमुख दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति कायम गर्न सके । त्यही सहमतिका आधारमा संविधानको मसौदा तयार भयो । यसबाट रिसाएको भारतले नाकाबन्दी नै लगायो । नाकाबन्दीले ओलीलाई झन् फाइदा भयो ।
संविधान जारी गर्दा लिएको पहलकदमीमै टेकेर उनी प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय इशारा र दबाबमा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको सन्देश भयो । ओली झन् ठूला राष्ट्रवादी कहलिए । यति मात्र होइन, उनले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएर राष्ट्रवादी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्दै गए । भारत गएर संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरी फर्किए ।
नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानकै लाभस्वरुप ओलीले २०७४ को आमनिर्वाचनमा जनलहर आफ्नो पक्षमा पार्न समर्थ भए । माओवादीलाई समेत आफ्नो सहयोगी दल बनाउन सक्षम ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजस्ता सत्ता र शक्तिका माहिर खेलाडीलाई पनि आफ्ना सहयोगी नै बनाए ।
ओली पुनः शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर उदाएपछि भने उनका सहयोगीहरुलाई पाँच त परै जाओस्, दुई वर्ष धैर्य गर्न पनि धेरै मुस्किल पर्यो । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको दुई वर्षे म्याद जब कट्न लाग्यो, ओलीविरुद्ध कोठे बैठक र भेलाहरु हुन थाले । विदेशीको संयोजनमा आफूविरुद्ध होटलहरुमा षड्यन्त्र गरिएको भन्दै ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । त्यसको प्रतिवादमा प्रचण्डले थप प्रस्टसँग भने– हटाउन भारतले होइन, मैले खोजेको हुँ ।
त्यहीबीचमा कहिले ओली बिरामी परे । कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संकटलाई पनि उनका लागि राजनीतिक रुपमा लाभ र सहुलियत बनेर आयो । त्यस्तै ओलीलाई हटाउन चरम जोडघटाउ चलिरहेका बेला २०७५ चैत ११ गतेदेखि देशै लकडाउनमा जाने अवस्था आयो । मुलुकमा महामारी बढ्दै गएकाले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने मुद्दा ओझेल पर्यो ।
अहिले पनि ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड र माधव नेपालहरु विपक्षी दललाई समेत मनाएर एक ठाउँमा उभिएका छन् । ओलीविरोधीहरुको यो गठजोड अहिले पनि महामारीकै कारण असफल हुन बेर लाग्ने छैन । किनभने महामारी यसरी उच्च दरमा बढिरहेको छ कि एक हप्तामै निकै खराब अवस्था आउन सक्नेछ ।
अस्पतालमा उपचार पाउने ठाउँ, घरमा हेरचाह गर्ने मानिस र घरबाट अस्पतालसम्म पुग्ने साधन नपाउने समस्या त छँदै छ । अब पशुपति आर्यघाटमा सदगद गर्ने ठाउँ समेत नपाएर बागमती किनारका खाली जग्गामा लस्करै शवदाह गर्नुपरेको छ ।
यो संकट सामान्य होइन, छैन । ओलीकै एकजना विरोधी नेता झलनाथ खनाल महामारीकै कारण जटिल स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अरु पनि कैयन् नेताहरु बिरामी छन् । दीर्घरोग भएका नेताहरु आफ्नो स्वास्थ्यको माया मारेर ओलीलाई ढाल्न सदनमा आउँछन् कि आउँदैनन् ? अर्को प्रश्न छ ।
जनता रोग र भोगले आहत् भएका बेला ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउन र अरु कसैलाई पुर्याउन सांसदहरुको पीसीआर परीक्षणमा स्वास्थ्य जनशक्ति खटाउनु कति उचित हुन्छ ? निषेधाज्ञाका कारण सांसदहरु देशका विभिन्न कुनामा पुगेर उतै अड्किएका छन् । बिरामीको उपचार गर्न छाडेर राज्यले उनीहरुलाई हेलिकप्टरमा ल्याएर उद्धार गर्छ कि ? यी सवाल पनि सँगसँगै पेचिलो गरी उठ्नेछन् ।
यसरी हेर्दा फेरि पनि संकटको लाभ ओलीले नै पाउने सम्भावना देखिँदै छ । यस अर्थमा भन्दा ओली पनि एक भाग्यमानी राजनेता नै हुन् ।